अमुल्य जीवन बचाउनुछ भने म’दिरा सेवन गर्नु अघि यी १० कुरा जानीराखौ::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
मङ्ल, पुस १५, २०७६
डा. नारायणसिंह गुरुङ- चाडपर्व होस् वा अन्य कुनै खुसी या दुःखको समय सकेसम्म रक्सी पिउने बहाना बनाइहाल्ने चलन हाबी हुँदै गएको छ नेपाली समाजमा। अझ सहरमा हुने प्रयः भोजहरु रक्सीले मात्तिएका हुन्छन्। अहिले त कुनै भोजमा निम्तो आउँदा पनि निम्तो पाउनेले ‘आफ्नो सवारी साधन लिएर आउनु कि नलिई’ भनेर सोध्छन् रे। भोजमा रक्सी छ भने आफैँले सवारी साधन चलाएर गएको त फाइदा हुँदैन, मापसेमा परिन्छ। यसको अर्थ के निकाल्न सकिन्छ भने, जुनसुकै बहानामा किन नहोस् मानिसहरुको रक्सीप्रतिको आशक्ति बढ्दै गएको छ। यसले मानिसहरुमा स्वास्थ्य संकट निम्त्याउँदैछ भनेर आँकलन गर्न गाह्रो कुरा भएन। किनकि रक्सी सेवन स्वास्थ्यका लागि कहिले पनि फाइदाजनक हुँदै होइन।
रक्सी बाँच्नका लागि नपिई नहुने पेय पदार्थ होइन। रक्सी पिउने बानीलाई कुनै बहानाले पुष्टि गर्न सकिँदैन, यो कुलत नै हो। यसले स्वस्थ्य शरीरलाई अस्वस्थ्य बनाउँछ, सामाजिक मान-सम्मान र प्रतिष्ठालाई माटोमा मिलाउँछ, सुखमय जीवनलाई दुखमय बनाउँछ। क्षणिक सुखानुभूति अथवा रमाइलोका लागि पिइने रक्सीले आफू, आफन्त र परिवारलाई बाँचुन्जेल रुवाउँछ। त्यसैले रक्सीलाई निषेध गर्न हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। (डा. गुरुङ गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका प्राध्यापक हुन्)
यौ न सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक
पटक पटक पिसाब लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? खानुस् खजूर हुनेछन् यस्ता फाइदै फाइदा
गर्भावस्थामा चिसोबाट जोगिन के गर्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
दात किराले खाएर हैरान हुनुहुन्छ ? एक रातमै दात खाने किरा चट पार्ने घरेलु उपचार थाहा पाई राख्नुहोस